ဘယ်ပစ္စည်းက အကောင်းဆုံး ရေချိုးပိုက်လဲ။ သတင်း- Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
ရေချိုးခန်းရေချိုးခန်းရှိ ရေချိုးခန်းတွင် ကောင်းမွန်သော ရေချိုးခေါင်းအပြင်၊ ချိတ်ဆက်ထားသော ရေပိုက်သည်လည်း အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးများသော ရေချိုးပိုက်များကို သံမဏိ၊ ပလပ်စတစ်၊ ရော်ဘာနှင့် အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးကောင်း ရေပိုက်များသည် တာရှည်ခံပြီး မကြာခဏ လဲလှယ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒါဖြင့် ပစ္စည်းက ဘာလဲ။ရေချိုးပိုက်?
၁ရေချိုးပိုက်ရေချိုးခန်းနှင့် faucet ချိတ်ဆက်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းမှထွက်လာသောရေသည် ပူသည် သို့မဟုတ် အေးသောကြောင့် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်ပိုများသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ရေပိုက်သည် အတွင်းပြွန်နှင့် အပြင်ပြွန်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အတွင်းပြွန်၏ပစ္စည်းသည် EPDM ရော်ဘာဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး အပြင်ပြွန်၏ပစ္စည်းမှာ ပိုကောင်းသည်မှာ 304 stainless steel ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေချိုးပိုက်သည် အမျိုးမျိုးသော ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် ပိုမိုထင်ရှားလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ တာရှည်ခံကာ၊ နှင့် ရေချိုးခန်းများတွင် ပိုမိုထင်ရှားလာမည်ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်မျိုးက အိုမင်းခြင်းနှင့် အပူဒဏ်ကို ပိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ elastic ဖြစ်သည်။
2. အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူခံနိုင်ရည်သည် ထင်ရှားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတွင်းပြွန်တွင်အသုံးပြုသည့် EPDM ရော်ဘာ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောရေပူများကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုခံနိုင်ကာ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟိရေချိုးပိုက်ရေချိုးနေစဉ်အတွင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ စီးဆင်းရန် ရေနွေးလိုအပ်သောကြောင့် ဤပစ္စည်းသည် အသင့်တော်ဆုံး အတွင်းပြွန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
3. EPDM ရော်ဘာသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော elasticity ရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆေးကြောရန်အတွက် ရေချိုးခန်းရှိ ရေပိုက်ကို မကြာခဏ ဆန့်ရန် လိုအပ်သည်။ EPDM ရော်ဘာ၏ ပစ္စည်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး ဆွဲခြင်းဖြင့် ပုံပျက်သွားမည်မဟုတ်ပေ။ မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားရန် လွယ်ကူပြီး ရေချိုးခန်းသုံးရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ဒါက EPDM ရော်ဘာကို အသုံးပြုရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။
4. ဝယ်ယူသည့်အခါရေချိုးပိုက်ဆန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ရေပိုက်၏ elasticity ကိုကြိုတင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဆန့်လိုက်သောအခါ၊ elasticity ပိုကောင်းလေ၊ အသုံးပြုထားသော ရော်ဘာအရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လေဖြစ်သည်။ ရော်ဘာအတွင်းပြွန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ရန်အတွက်၊ များသောအားဖြင့် ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော နိုင်လွန်အူတိုင်ရှိသည်။
5. 304 သံမဏိအပြင်ဘက်ပြွန်သည် အတွင်းပြွန်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းကို အတွင်းပြွန်၏ ဆွဲဆန့်သည့်အကွာအဝေးကို ကန့်သတ်နိုင်ပြီး ပေါက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည့် အကွေ့အကောက်များသော သံမဏိကြိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်အတွက် အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် stainless steel အစား stainless steel ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့ကို ဆွဲဆန့်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ကို သိရှိရန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Stainless Steel ဖြစ်ပါက မူလအနေအထားသို့ ပြန်သွားပါမည်။
လွန်ခဲ့သော:ရေချိုးပိုက်များ ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းအရင်းနှင့် ပြုပြင်နည်းများ